ဘေဘုတ်ကြော်ငြာအတွက် အခြေခံစည်းမျဉ်း (၉) ချက် – Digital Parmaukkha
[ July 3, 2017 ] ၈၀-၂၀ စည်းမျဉ်းနှင့် Marketing	Marketing
[ June 20, 2017 ] Digital Marketer တစ်ယောက်အနေနဲ့ မွေးမြူသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့် (၇) ခု	Digital Marketing
[ June 13, 2017 ] Digital Marketing မှာ ဘာကြောင့် Strategy ရှိသင့်တာလဲ ?	Digital Marketing
[ June 7, 2017 ] Digital Marketing မှာ ဘာတွေအားသာလဲ? ဘာတွေအားနည်းလဲ?	Content Management
[ June 6, 2017 ] ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသုံးအများဆုံးဆိုရှယ်နက်ဝပ်များ	Internet Knowledge
HomeMarketingဘေဘုတ်ကြော်ငြာအတွက် အခြေခံစည်းမျဉ်း (၉) ချက်
ဘေဘုတ်ကြော်ငြာအတွက် အခြေခံစည်းမျဉ်း (၉) ချက်
Consumers (စာသုံးသူတွေ) ဟာ ဘေဘုတ်တွေကို ကြာကြာကြည့်လေ့မရှိကြပါဘူး။ ဒါဟာ အခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်တုန်းကတည်းက ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုခေတ်မှာတော့ ဖုန်းတွေ၊ တက်ဘလက်တွေ အစရှိတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသုံးအဆောင်တွေ အများအပြားပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာတော့ လူတွေရဲ့အာရုံဟာ ဘေဘုတ်တွေအပေါ်မှာ ပိုလို့တောင်နည်းပါးသွားပါသေးတယ်။ လူတွေဟာ လမ်းပေါ်မှာ သွားလာနေချိန်မှာ သူတို့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုဟာ ဘေဘုတ်တွေရှိတဲ့အပေါ်ကိုရှိမနေကြပဲ၊ ဖုန်းတွေရှိတဲ့ အောက်ဖက်ကိုသာ အမြဲရှိနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာတွေဟာ အလွန်ပဲအသုံးဝင်လာပြီး ထိရောက်မှုကလည်း အလွန်ကြီးမားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘေဘုတ်တွေဟာ ဘယ်လိုပဲ လူတွေအာရုံစိုက်မှုနည်းလာပါစေ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုရဲ့ Branding အတွက် အခုချိန်ထိ မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ( အဲ့ဒီအကြောင်းကို “ဘေဘုတ်ကြော်ငြာတွေဟာ ထိရောက်မှုရှိရဲ့လား” ဆောင်းပါးတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။) ဒါကြောင့် လူတွေအာရုံစိုက်မှုနည်းပါးလာတဲ့ ဘေဘုတ်တွေထဲမှာ ကိုယ့်ဘေဘုတ်ကြော်ငြာကို လူတွေပိုပြီးကြည့်မိအောင်၊ အာရုံစိုက်မှုအောင် ဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ ….
(၁) စာလုံးခြောက်လုံး (သို့မဟုတ်) ခြောက်လုံးထက်နည်းပါးတာပိုကောင်းပါတယ်။
ဘေဘုတ်တွေကို လူတွေမြင်တဲ့၊ ကြည့်တဲ့အခါမှာ သွားရင်းလာရင်းအချိန်တွေမှာ ကြည့်ဖြစ်တာများပါတယ်။ မီးပွိုင့်နားကဘေဘုတ်တွေကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ဘေဘုတ်တစ်ခုကို ကြည့်ရှုချိန်ဟာ စက္ကန့်ပိုင်းမျှသာဖြစ်လို့ စာလုံးတွေအများကြီး ပြွတ်သိပ်နေအောင်ရေးထားတာ ထိရောက်မှုမရှိနိုင်တဲ့ ကြော်ငြာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘေဘုတ်တွေဟာ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့ ကြော်ငြာမဟုတ်ပဲ၊ ကိုယ့်အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ပုံရိပ်ကို မြှင့်တင်ဖို့ကြော်ငြာတာသာဖြစ်လို့ ကိုယ့်အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ် (သို့မဟုတ်) ကိုယ်စားပြုတဲ့ စာလုံးအနည်းငယ်သာပါဝင်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – Apple ရဲ့ Think Difference
(၂) သတိပြုစရာဖြစ်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် အနှောင့်အယှက်တော့မဖြစ်စေရ
ဒါဟာ နည်းနည်းတော့အကြပ်ရိုက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဘေဘုတ်တွေကိုကြည့်ရှုကြမယ့်သူတွေထဲမှာ လမ်းပေါ်မှာသွားလာနေတဲ့ ယာဉ်မောင်းသူတွေ၊ ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသူတွေ၊ စက်ဘီးစီးနင်းသူ၊ လမ်းလျှောက်သူ၊ လမ်းကူးသူ စသည့်ဖြင့်ပါဝင်ကြလို့ သူတို့ ဘေဘုတ်ကိုအာရုံအရမ်းအစိုက်လွန်ပြီး အန္တရယ်မဖြစ်စေဖို့ကလည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ သိစိတ်ကဖြစ်စေ၊ မသိစိတ်ကဖြစ်စေ သတိပြုရုံသာဖြစ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။
(၃) ဘေဘုတ်ဟာ စာသုံးသူတွေဆီက တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှုရရှိစေတဲ့ ကြော်ငြာနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ
နံပါတ်(၁) မှာပြောခဲ့သလိုပဲ ဘေဘုတ်တွေဟာ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းတိုက်ရိုက်ရှင်းပြပြီး ကြော်ငြာတဲ့ ကြော်ငြာနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ဘေဘုတ်ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ ၉၉% ဟာ ဘေဘုတ်တွေပေါ်မှာရှိတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေ၊ ဝက်ဆိုဒ်လိပ်စာတွေကို အာရုံမစိုက်မိကြပါဘူး။ ဘေဘုတ်မှာမြင်ပြီး ဖုန်းလည်းခေါ်မကြည့်သလို၊ ဝက်ဆိုဒ်တွေထဲလည်း တကူးတကဝင်မကြည့်ရှုကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘေဘုတ်တွေဟာ Secondary Advertising Medium သာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Brand ကို မြှင့်တင်ဖို့၊ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းအတွက်ပြုလုပ်နေတဲ့ Promtion တွေ၊ Campaign တွေကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်သာ ဘေဘုတ်တွေကို အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။
YOU MAY ALSO LIKE : “ဘေဘုတ်ကြော်ငြာတွေဟာ ထိရောက်မှုရှိရဲ့လား” ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုရန်နှိပ်ပါ
(၄) အိုင်ဒီယာလန်းရမယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကြီးရှုပ်ထွေးပြီး ဆန်းသစ်တာမျိုးမဖြစ်ရဘူး
အရမ်းကြီးရိုးရှင်းနေရင်လည်း လူတွေကအာရုံစိုက်မှုမရသလို၊ အရမ်းရှုပ်ထွေးနေတာမျိုးကလည်း လူတွေကို စိတ်ရှုပ်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ ပဟေဋ္ဌိဆန်ဆန် စာသား (သို့မဟုတ်) ပုံတွေကိုအသုံးပြုတာမျိုးလည်းပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ – အရင်က စူပါကော်ဖီလုပ်သလိုမျိုး။ ဒါပေမယ့် အိုင်းစတိုင်းလိုလူမှ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ပဟေဋ္ဌိမျိုးဖြစ်နေရင်လည်း လူတွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုက လျော့နည်းသွားမှာပါ။ စာသားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပုံပဲဖြစ်ဖြစ် အိုင်ဒီယာက ဆန်းသစ်ပြီးရိုးရှင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
(၅) ဘေဘုတ်အရေအတွက်များလေ၊ ကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ အထွေအထူးပြောစရာမလိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေဘုတ်များများထောင်လေ၊ လူများများမြင်လေ၊ ပိုအကျိုးရှိလေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြသာနာက ဘေဘုတ်တွေဟာ ဈေးမပေါကြပါဘူး။ ပြီးတော့ ဆိုရှယ်နက်ဝပ်မှာကြော်ငြာသလို ထိရောက်မှုကို အတိအကျတိုင်းတာလို့မရပါဘူး။ ဘေဘုတ်တွေဟာ Mass Advertising Medium တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ ဘေဘုတ်တွေရဲ့ထိရောက်မှုကို Traffic, Visibility, size, location စတာတွေအပေါ်အခြေခံတွက်ချက်တဲ့ GRP ( Gross Ratings Point ) နဲ့တိုင်းတာပါတယ်။ GRP ကို ၁ ကနေ ၁၀ဝ အတွင်းကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ပြသပြီး GRP 50 ဆိုရင် ထိုဘေဘုတ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ ဘေဘုတ်ကိုကြည့်နိုင်လူဦးရေရဲ့ ၅၀% က ဘေဘုတ်ကိုကြည့်ရှုကြတယ်လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၀ဝ% မြင်ချင်ရင် ၁ ခုထက်ပိုသုံးရမှာဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကလည်း ပိုမိုများပြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Brand ရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်း များရင်များသလို မြင့်တက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – ooredoo မြန်မာနိုင်ငံကို စတင်ဝင်ရောက်လာတုန်းက နေရာအနှံ့မှာ အနီရောင်တွေနဲ့ ပြည့်နေအောင်လုပ်ပြီး သူ့ Brand ပုံရိပ်ကို မြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။
(၆) ဘာလဲဆိုတာ မပြောပါနဲ့၊ ပြသပါ
ကိုယ့် Brand ကဘာလဲဆိုတာကို စာသားတွေနဲ့ရှင်းပြနေတာထက်၊ ပုံတွေ၊ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ပြသလိုက်တာပိုပြီး ထိရောက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ မျက်စိထဲမှာလည်းပိုစွဲသွားစေပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ 2D သာမကတော့ပဲ၊ 3D ဘေဘုတ်တွေ၊ အနားစွန်းတွေမှာ ဘေးကိုထွက်နေတဲ့ဘေဘုတ်တွေ စသည်ဖြင့် Creative ဖြစ်တဲ့ ဘေဘုတ်တွေကိုပါ မြင်တွေ့နေရပါပြီ။
(၇) စာနဲ့ပုံနဲ့ ထပ်မနေပါစေနဲ့
ဘေဘုတ်တွေဟာ ဈေးကြီးတဲ့အတွက် စကားလုံးတိုင်း၊ ပုံရိပ်တိုင်းဟာ မိမိ Brand အတွက်အကျိုးရှိနေတာမျိုးဖြစ်နေရပါမယ်။ သင့်စာသားဟာ သင့်ဘေဘုတ်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဒီဇိုင်း၊ ပုံ (visual) အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတာမျိုးဆိုရင် ဖြုန်းတီးမှုသက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံရိပ်နဲ့ ပြောချင်တဲ့ Message ကိုပေးပြီးဖြစ်လို့ စာနဲ့ထပ်ရှင်းပြနေရင် စာလုံးဖြုန်းတီးမှုသာဖြစ်ပါတယ်။
(၈) လိုဂိုဆိုဒ်ကို ဂရုပြုပါ
ကြော်ငြာရှင်တိုင်း ဖြစ်ချင်တဲ့အချက်ကတော့ “လိုဂိုကို ကြီးကြီးလေးလုပ်ပေးပါ” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။ လိုဂိုကြီးလေ ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရလေဖြစ်လို့ပါ။ ဘေဘုတ်ကြော်ငြာတွေက ဈေးကြီးပေးရတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့လိုဂိုကိုတော့ ကြီးကြီးလေးဖြစ်စေချင်မှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကြီးလွန်းရင်လည်း ပေးချင်တဲ့ Message ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသလို၊ သေးလွန်းရင်လည်း မကောင်းပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံ လိုဂိုမပါတဲ့ကြော်ငြာတောင် ပိုပြီး Powerful ဖြစ်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ – Chivas Wisky ဟာ တစ်ခါတုန်းက သူတို့ကြော်ငြာမှာ သူတို့ Logo မပါပဲကြော်ငြာဖူးပါတယ်။
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေကို လိုက်နာပြီး ကြော်ငြာဘေဘုတ်တစ်ခုဖန်တီးပြီးပြီ။ အိုင်ဒီယာလည်းဆန်းသစ်တယ်၊ စာသားကလည်းတိုတိုနဲ့လိုရင်းကိုရောက်တယ်၊ အရောင်တွေအသုံးပြုထားတာလည်း စိတ်တိုင်းကျတယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ့်ကြော်ငြာဟာ တကယ်ရော လူတွေစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါ့မလား၊ ဖတ်လို့အဆင်ပြေပါ့မလား၊ နားလည်လွယ်ပါ့မလား စမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဘေဘုတ်ကြော်ငြာဒီဇိုင်းကို လိပ်စာကဒ်လောက်အရွယ်အစားထုတ်ပြီး လူတွေကိုပြပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် ကွန်ပျူတာမော်နီတာအပြည့်အရွယ်အစားနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ ကြည့်ရတာ နားလည်လွယ်ရဲ့လား၊ အာရုံစူးစိုက်မှုရှိရဲ့လား စသည်ဖြင့် စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
( ဖတ်ထား၊ မှတ်ထားတာလေးကို မိမိအမြင်နဲ့ နားလည်သလောက်ရေးထားတာဖြစ်လို့ အမှားပါရင် Digital Parmaukkha Facebook မှာ ဝေဖန်ထောက်ပြအကြံပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။)
လင်းထက်မော် (Digital Parmaukkha)
၈၀-၂၀ စည်းမျဉ်းနှင့် Marketing
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် Marketing ဟာထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလား?
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသုံးများလာသော Instagram အကြောင်းအကျဉ်း
Social Media ပေါ်မှာ Personal Branding တစ်ခု တည်ဆောက်မယ်
facebook တွင်ကြော်ငြာရန် Page တစ်ခုဖန်တီးခြင်း
၈၀-၂၀ စည်းမျဉ်းနှင့် Marketing July 3, 2017
Digital Marketer တစ်ယောက်အနေနဲ့ မွေးမြူသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့် (၇) ခု June 20, 2017
Digital Marketing မှာ ဘာကြောင့် Strategy ရှိသင့်တာလဲ ? June 13, 2017
Digital Marketing မှာ ဘာတွေအားသာလဲ? ဘာတွေအားနည်းလဲ? June 7, 2017
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသုံးအများဆုံးဆိုရှယ်နက်ဝပ်များ June 6, 2017
ဘေဘုတ်ကြော်ငြာအတွက် အခြေခံစည်းမျဉ်း (၉) ချက် May 30, 2017
Facebook Ads ကို Visa/Master Card နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ဘယ်လိုကြော်ငြာမလဲ May 29, 2017
Content Marketing ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားများ May 16, 2017
သင့်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းကို သူများထက်ရောင်းကောင်းစေမယ့် နည်းလမ်း (၅) ချက် May 16, 2017
ဘေဘုတ်ကြော်ငြာတွေဟာ ထိရောက်မှုရှိရဲ့လား ? May 9, 2017
Digital Parmaukkha © 2017 - All Rights Reserved.